Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyadda Germany oo Isugu-timid kulan wajiyo kala duwan lahaa:
Maamulka Jaaliyadda Germany oo Isugu-timid kulan wajiyo kala duwan lahaa:
Maamulka jaaliyadda dalka Jermalka ayaa shir u qabtay jaaliyadda lagaga arinsanayay arima muhiim u ahaa jaaliyadda. Waxaana ka mid ahaa qodobada lagu falanqeeyay shirka;
In guddiga maaulka dhalinyarada hayay lagaga saaroo ku meel-gaadhka iyadoo lagu guulaystay in guddi cusub loo doortay, kaasoo wixii hadda ka danbeeyana hawshooda si rasmi ah u qabsan-doona. Waxaana loo doortay xoghayaha cusub Maxamed Carab, waxaa kaloo la dhisay gudigii lashaqayn lahaa xoghayaha cusub. Xoghayaha cusub ee la doortay oo madasha ka hadlay ayaa umahad celiyay dadkii doortay waxaa una ka codsaday gudiga cusub in ay laba laabaan shaqda halganka, doorashadan oo udhacday si dimuquradiyda waafaqsan ay aa ahayd mid an horay loo arag.
Waxaa lagu soo casuumay shirka dad badan oo Somalida Ogadenya ah oo dhowaanahan soo galay dalka Jarmalka kuwaasoo ay jaaliyaddu ku hawlanayd soo uruurintooda, iyadoo shirka uu ka mid ahaa ajendayaashiisa isbarasho muhiim u ah jaaliyadda iyo dad-weynaheedaba. Waxaa shirka ugu muhiimsanaa oo kale iyadoo dadweenihii yimid iyo maamulkii jaaliyadda ay isku barteen, taasoo si aan lamalayn karinna ugu farxad galisay dadkii meesha fadhiyay.
Abwaan Haybe iyo Fananka weyn Cabdi badil ayaa iyaguna meesha ku soo bandhigay heeso halhgameed aad u qiimo badan iyo gabayo dhaqaajiyay dhiiga bulshadii ku sugna madasha isku soo wada duuboo shirkan ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan oo farxadi ku dheehantahay.
Waxaa iyadana muhiim ah in dadweenihii aan shirka u helin waqti ay hanbalyo u soo direen madax jaaliyadda iyagoo ballan qaaday inay hiil iyo hooba lagarab istaageen Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ee u taagan halganka lagu xoreynayo dalkoodii hooyo.
GUUL IYO GOBONIMO/MAAMULKA JAALIYADDA JARMALKA.